Wararka - Bandhigga weyn ee Dubai 5
The Middle East Concrete 2019 / The Big 5 culus 2019, oo lagu qabtay 25 - 28 Noofambar 2019 magaalada Dubai ee Isutagga Imaaraatka Carabta, ayaa soo dhammaaday Kahor bilowga bandhigga, Yantai Jiwei wuxuu diyaar garow buuxa ugu jiray bandhigga. Had iyo jeer waxaan ka hor marnaa tayada, mana niyad jabi doonno macaamiisheenna. Waxaan ku tiirsan nahay alaabta ceeriin ee heerka koowaad, tikniyoolajiyadda heerka koowaad, kooxda heerka koowaad iyo adeegga hal-joogsi ah si loo kaydiyo kharashaadka macaamiisha iyadoo la ilaalinayo tayo sare leh. Waxaan macaamiisha kula xariirnaa si daacadnimo leh dhammaan macaamil kasta, waxaanan rajeynaynaa inaan la dhisno iskaashi adag oo muddo dheer ah macaamiisha. Waxaan u nimid bandhiga alaab tayo wanaagsan leh.
Intii uu socday bandhiga, kooxda Jiwei ayaa waxaa ka go'an inay siiyaan macmiil kasta adeegyo tayo sare leh, qiimo macquul ah iyo alaabooyin lagu kalsoon yahay. in ka badan 100 macmiil oo ka kala socda Imaaraadka Carabta, Sacuudi Carabiya, Qatar, Cumaan, Yemen, Iiraan, Ciraaq, Kanada, Hindiya, Suudaan, Masar, Turkiga, Kuweyt ayaa booqday waababkii HMB. Ilaa maalintii ugu dambaysay ee bandhigga, Yantai Jiwei wuxuu helay dhowr amarro cusub iyo iskaashi ujeeddooyin ah oo ku saabsan jabsadayaasha haydarka, dubbayaasha dubbayaasha, burburiye burburka iyo alaabada kale ee la xiriirta, gaaritaanka natiijooyinka bandhigga la filayo. , oo waara, waxay ku guuleysteen jacaylka macaamiil badan sidaa darteed waxay heleen amarro badan, iyagoo ku guuleystay xaalad guul-guul ah.
Waad ku mahadsan tahay dhammaan macaamiishii booqatay HMB, waxaanan ugu mahadnaqayaa aqoonsigooda ay ka heleen jabsadeyaasha HMB, waxaanan u mahadcelinayaa Big 5 culus 2019. Waxaan rajeyneynaa bandhigga soo socda oo aan soo dhaweyno asxaabta na jecel ee aan mar kale soo booqanno HMB. Waxaan sii wadi doonaa inaan horumarino awoodaheena oo aan sii wadno naqshadeynta alaabada dabooleysa baahida macaamiisha. Waxaan rajeyneynaa in Yantai Jiwei uu noqon doono halbeeg lagu qiimeeyo warshadaha, isagoo u adeegaya macaamiil badan isla markaana keenaya wax soo saar aad u wanaagsan. Waxaan aaminsanahay in Jiwei uusan kuu oggolaan doonin.